မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသတ်ခြင်း…Review Myself.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသတ်ခြင်း…Review Myself..
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on May 14, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 40 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့ အချိန်အားလေးနဲနဲရလို့ တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်ဗျာ…
လောကကြီးမှာ လေးစားတာ ကြည်ညိုတာ ချစ်တာ ..ဒါတွေကအလွယ်တကာ့ အလွယ်ဆုံးတွေဘဲဗျ..ဘယ်သူမဆို အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်..ဆိုပါတော့ဗျာ..
ကျွန်တော် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားကြည်ညိုတယ်..ကိုးကွယ်တယ်..
နေ့တိုင်း ဖင်ဗူးခေါင်းထောင်ပြီး ရှိခိုးတယ်..ဆီမီး ပန်း ဆွမ်းကပ်တယ် ပါးစပ်က ရသမျှ
ဂုဏ်တော်တွေ ဘာတွေ တရစပ်ရွတ်တယ်..တစ်ခါမှဝတ်မပျက်ဘူး..
သိပ်လေးစားတာ..ဒီဘိုးတော် တော်တော် ဘုရားတရားကြည်ညိုတယ်..တစ်နေ့မှ
ဘုရားရှိခိုးသံကြားရရင်…မနက်၅နာရီတိတိဘဲ…အဲသလိုဗျ…ဘုရားများဘယ့်ဂလောက်ကြည်ညိုသလဲဆိုရင်..မြန်မာပြည်မှာရှိသမျှ တန်ံခိုးကြီးဘုရား မရောက်ဖူးတာမရှိသလောက်
လိုက်ဖူးမျှော်ခဲ့တယ်..ပြီးရင် ကြည်နူးလိုက်ရတာ ..ငါကွ..လို့ကြွေးကြော်မိပါရဲ့….
ဘုန်းကြီးလဲ သုံးခါဝတ်ဖူးတယ်…ဘုန်းကြီးဝတ်ကြီးနဲ့လဲ ဟန်လုပ်ပြန်တာဘဲ…
မနက်ဆိုအစောကြီးထ..ဘုရားရှိခိုး..ပီးရင် ကျောင်းထဲကစေတီလေးရှေ့ ပုတီးသွားစိတ်..
ပီး အာရုံဆွမ်းစား…ကျောင်းလာပီး ကိုယ့်ကို လာတွေ့တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းမှန်သမျှ
ကိုယ်ဘဲတရားထူးတွေ့ထားလေဟန်နဲ့ တရားတွေရှောက်ဟော..(အပေါင်းအသင်းတွေကလည်း ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့မို့ သင်္ဃန်းအားနာပီး အောင့်သက်သက်နဲ့ နာယူကြ..)…အဲလူဝတ်လည်းလဲရော လဲတဲ့နေ့မှာဘဲ..သူငယ်ချင်းတွေ
နဲ့ ဘုန်းကြီးလူထွက်တဲ့နေ့ အထိန်းအမှတ်ဆိုပြီး..
ဒါပေမဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေ လိုက်နာဘို့ကျတော့ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့ ဒီနေ့ထိမလုပ်ဖြစ်ဘူး..တရားထိုင်ရင်ကောင်းမှန်းသိတယ်..တစ်ခါမှ မထိုင်ဖူးဘူး..
ဒီလိုပါဘဲဗျာ..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဆိုရင် ချစ်သလား လေးစားသလား ကြည်ညိုသလား
မမေးပါနဲ့..ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပြိုင်ရဲတယ်…ကြီးမိုက်လောက် ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားကြည်ညိုတဲ့လူမရှိနိုင်ဘူး…ဒါပေသိ….ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့လမ်းစဉ် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်ဓါတ်
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စါရိတ္တအတိုင်း ဖြစ်အောင် ကျုပ်ဒီနေ့ထိ မကျင့်ကြံဖူးဘူး..မပြုပြင်ဖူးဘူး..
ခက်တာကိုးဗျ…ဒါအမှန်ပြောတာ…နိစ္စဓူဝ လောကကြီးထဲမှာ လွယ်တာတွေအသားကုန်လိုက်နာပြ..ခက်တာတွေမသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး
ဒီဂေဇက်ဆိုတဲ့ ရွာကြီးထဲမှာဘဲကြည့်..ရွာသူားတစ်ယောက်က အရေးအသားကောင်းကောင်းနဲ့ ရသစာစုတစ်ခုတင်လာတယ်ဆိုပါတော့..ကြီးမိုက်ထပြီး
ဓါတ်ပုံတွေတော်တော်လှတယ်ဗျို့…ဒေသမျိုးစုံခရီးတွေသွားပြီး ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားက ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးတာ ကျေးကျေးပါ…အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့”…ဒါပါဘဲ..ကြီးမိုက်ရဲ့ကွန်မန့်စတိုင်လေ..ဟဲဟဲ..
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်ပြီး…ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြေတွေ
တစ်ကယ်တော့..ရုံးမှာ အဲကွန်းခန်းထဲနေပီး အီးမေးတွေဖတ်…ဂေဇက်ကိုလစ်ရင်လစ်သလိုဝင်ကြည့်…လူကြီးဖြတ်သွားရင်
ဘော့စ်ရောက်နေလို့ကွာ..သွားရအုန်းမယ်..တကယ်တော့ စိတ်ကူးထားတာ မိန်မချက်တဲ့
ထမင်းလေးစာပီး စောစောအိပ်လိုက်ချင်တာကွ…အေးလေ သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်နေတော့လဲ
ဖို့ ထွက်ခဲ့ပြန်ပါရော….အော် ကြီးမိုက်..ကြီးမိုက်…တတ်လဲတတ်နိုင်ပါ့……..
ဒါနဲ့ဘဲ ဒီနေ့ အချိန်လေးအားနေတာနဲ့…ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်
မိပါတယ်….။နိဂုံးကမ္မ အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့…ကြီးမိုက်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင်
မိုက်မဲသူတစ်ယောက်ဟာ လုပ်လို့လွယ်တာ..လိုက်နာလို့လွယ်တာ..အများအထင်ကြီးအောင် ဟန်ဆောင်ပြုမူတာတွေလုပ်ရင်း…ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်တော့သိပါရဲ့..ကြီးမိုက်ရဲ့ဘ၀မှာ
ကျင်လဲလို့…ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ ကြီးမိုက်ကိုကြည့်ပီး ဘာမှမဖြေနိုင်ဘဲနှုတ်ဆိတ်နေလိုက်ရတယ်..
အော်……..အော်..မေ့လို့ဗျို့…ကျုပ်ကျွမ်းကျင်တာ နာမည်ကြီးတာ တစ်ခုတော့ရှိပါသေးသကော..ဟဲဟဲဟဲ..အဲဒါကတော့..အရက်သောက်ပီးပျော်တတ်ပါးတတ်တာဘဲ..အဲဒီကိစ္စမှာတော့ကျုပ်အမှန်တကယ်နာမည်ကြီးပါရဲ့ဗျာ…ကောင်းရော..
ပြောရအုံးမယ်ဗျို့..အိမ်မှာ အားလို့သော်၎င်း ဧည့်သည်စောင်သည် ရောက်လို့သော်၎င်း
သီလရှင်ဝတ်တဲ့နေ့က မိသားစုဓါတ်ပုံလေးရှိပါတယ်ကွ… မင်း…နော်..”
စောစောစီးစီးထဖတ်ကြည့်တယ်။ မှန်တာတွေချည်းပြောတယ်။ မှန်လွန်းတယ်။လူတိုင်းကိုထိမယ်ထင်တယ်။ နောက် ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ဦးနှောက်ထဲပြေးဝင်လာတယ်။ လက်ထဲကနေထုတ်ကြည့်မယ်။
ကြံကြံဖန်ဖန်…..ကျီးမိုက်သတ္တ၀ါက..ငါ့အစာရပြီဟဲ့လို့ မာနက ခပ်ထန်ထန်…..ရေလယ်ခါင် ပင်လယ်ကြောမှာ…..အော်… . သေ၀ဲနဲ ကြုံတွေ့ရလေပြန်…
ငယ်ငယ်တုန်းက မပြေလည်လို့ အသက်ကြီးပြေလည်မှ မိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးပါ
တစ်ဖက်က ပြန်းတွေးရင် ဘဝအတွက်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရသွားပြီလို့ ဆိုရင်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကိုယ်နှစ်သက်ရာလုပ် သူတပါးမထိခိုက်ရင်ပြီးတာပဲနော်
ကျုပ်အကြောင်းပြောနေသလား လို့ ထင်ရအောင်ကို ထပ်တူကျနေပြန်ရောဗျို့….
အင်း…. တကယ်တော့ လူများစုရဲ့ အကြောင်း..၊ လူတွေရဲ့ အကြောင်းပဲပေါ့နော..။
ဒီတခါတော့ ကွန်မင့်မှာတင်မဟုတ်ပဲ တကယ်လဲ သတိထားဘို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်..။
ကျုပ်ကို ရွာသူ ရွာသားတွေ မေ့သွားမှာစိုးလို့စာရေးဘို့စဉ်းစားရင်း
ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးတော့ အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့နော…
ဒါတောင်ရေးတင်လိုက်ပီးမှ ရှက်သလိုလိုဖြစ်နေသေး..ဟေး ဟေး ဟေး..
တကယ်ပြောရရင် ကျနော်တို့မှာ ဘ၀အမောတွေအများကြီးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လက်မခံချင်ဘဲလက်ခံနေရတဲ့
ဒီအထဲကမှ အသက်အရွယ်အရ စိတ်ပင်ပန်းမှု့တွေဖြေနိုင်ဘို့ ပျော်စရာရှာရတာကိုးဗျ။
တစ်ချို့က စာဖတ် ကော်မင်းပေး
ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ လုပ်ကြတာပါဘဲ။
ဒါတော့လုပ်နိုင်တယ် ဟိုဟာတော့ ငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ၀မ်းနည်းနေလို့လဲ မရနိုင်ပြန်ပါဘူး။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကျင့်တရား စိတ်ထားကောင်းအောင်(တတ်နိုင်သလောက်)လေးနဲ့
ကျနော်စာတွေရေးနေ ပုံတွေတင်နေတာလဲ သိပ်အထင်မကြိးပါနဲ့ကိုမိုက်ရေ။
ကေတီဗွီ တစ်ဆက်ရင် တစ်သောင်း
မာဆတ် တစ်ဆက်ရှင် သုံးထောင်
စည်ဘီယာ တစ်ခွက် ရှစ်ရာ ဆိုတာတွေနားမကပ်နိုင်တော့
တစ်နာရီလုံးလုံးကြီုက်သလိုသုံးမှ လေးရာ ဘဲပေးရတဲ့ အင်တာနက်မှာ စာရေး ဓါတ်ပုံတင်အလုပ်ကို ကျနော်ရွေးလိုက်တယ်လေ။
ကဲ စာတွေရေးနေတိုင်း ဓါတ်ပုံတွေတင်နေတိုင်း
လုပ်နိုင်လှချည့်ရဲ့လို့ ချီးမွမ်းနေလို့ မရဘူး ဆိုတာ သဘောပေါက်တော့ ကိုမိုက်ရေ။
လေးကြီးမိုက်ရေ …….. လေးလေးရဲ့စာလေးဖတ်ပြီး ရင်ထဲကနေကို ရီမိတယ် ………. စိတ်ထဲလွတ်လပ် ပေ့ါပါးပြီး ၀မ်းသာသွားတယ် ….. လေးကြီးမိုက် ဘုရားကန်တော့ဝတ်ဖြည့်တာ ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲ အတော်ကုသိုလ်ရပြီး သမီးထက်သာနေပါတယ် သမီးဆို ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပျော်ပြီး ဘုရားတောင်မရှိခိုးနိုင် ခဲ့တဲ့ဘ၀ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် စနေနေ့ကစပြီး စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြန်လုပ်ပြီး ဘုရားတရားဘက်ကိုပြန်ဦးတည် နေမိတယ် ……. လေးလေးရယ် ကိုယ်ကိုတိုင် ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ပေမယ့် သူများတွေကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တာကို ချီးကျူးနိုင်တာလဲ မင်္ဂလာတပါးပါပဲ ……. လေးကျော်ဟိန်းရေ …….. စာလေးဖတ်ပြီး လေးရဲ့ မျက်နှာလေးမြင်ယောင်မိပြီး ရီလိုက်ရတယ် မနက်စောစောစီးစီး မင်္ဂလာရှိသွားပါတယ်………
ကိုကြီးမိုက်….ကျွန်အပါအ၀င် လူတော်တော်များများဟာ ဟန်ဆောင်မူ့တွေနဲ့ပါ။ ကိုယ့်အကြောင်းကို အမှန်တိုင်းပြော၇ဲတာကိုက ရိုးသားမူနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းတစ်ခုပါ။
ကိုယ်ပိုင်ဘ၀နဲ့ပဲ လမ်းဆက်လျှောက်နေတဲ့ ကိုကြီးမိုက်ရေ ဒီညနေ တစ်ခွက်၊ တစ်ဖလားလောက် ချလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
ဒီစာကို ပရင့်ထုတ်ပြီး အန်တီမိုက်ကို သွားပို့ ပေးဦးမှ
အူးကြီးမိုက်ရဲ့ ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းလေး ဖတ်ရကောင်းသဗျား..
ကျနုပ်ဗိုက်ကလေးလဲ ၀မ်းဒေး ပြန်ထောင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ်..
ကျနုပ်လဲ ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား လက်က ကားယားကားယား..အပြောကတော့ရွှေမန်း အကကတော့ ချိုမိုင်မိုင်အစားထဲကပါပဲ..ဗျာ
ကိုယ်ယောင်လာပြဖော်ရတဲ့အတွက် ထီပေါက်ရင် ဘီယာအ၀တိုက်ပါဦးမယ် အူးလေးရာ…
အဲအခါကျရင် မိန်းမကိုတော့ အမှန်အတိုင်း သွားမိုက်မယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးမှ လာခဲ့ပေါ့
ဦးကြီးမိုက်ရေ …လူသားတိုင်းကတော့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ ဘ၀ပေးအခြေနေအရ ကျရာနေရာမှာ … အဆင်ပြေသလို ပြုမူနေထိုင်ရတာပါပဲ … ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး .. အားမလို အားမရ ဖြစ်နေမယ့်အစား … ကောင်းကွက်လေးတွေ .. ရှာကြံပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးလိုက်ပါနော် … ။
မိသားစုကို သစ္စာသိသူတစ်ယောက်အဖြစ် …. ၊ ဇနီးမယားကို တန်ဖိုးထားသူတစ်ယောက်အဖြစ် … မိဘ၀တ္တရားကျေပွန်သူတစ်ယောက်အဖြစ် … ၊ အပေါင်းသင်းဆံ့သူ လူမှုရေးကောင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ် ၊ အလုပ်ခွင်ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူ … တာဝန်ကျေပွန်သူအဖြစ် …. ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး .. သမ္မာအာဇီဝ ရှာစားသူအဖြစ် … + + + + + + + + ဦးမိုက်ရေ…တွေ့လား… ဂုဏ်ယူစရာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်နော် … ။ကောင်းကွက်လေးတွေလည်း ရှိပါသေးကြောင်း ပြန်လည် တူးဖော်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
ဦးမိုက်ကြီး ဘယ်လိုပဲဘ၀ ကိုဖြတ်သန်းဖြတ်သန်း အရက်ခွက်ကိုင်ပေမယ့်…. အလုပ်၊ အိမ်ထောင်ရေး မှာ လစ်ဟင်းမှုမရှိဘူးဆိုတာ ဦးမိုက်ပြောတဲ့စကားတွေ နဲ. သိသာပါတယ်.. ပြီးတော့ သားသမီးတွေကို ဘယ်လိုဆုံးမ ဘယ်လိုထိန်းကြောင်းသလဲ ဆိုတာ လဲ ဦးမိုက်နဲ.စကားပြောဘူးတော့ သိခဲ့တာပါပဲ…
ဘယ်လိုပဲ မိုက်မိုက် ဦးကြီးမိုက် ခေါ် ဦးကျော် ကို ကျွန်တော်တို. လေးစား နေလျက်ပါ ခင်ဗျာ….
ကြီးမှမိုက်တဲ့ ဦးမိုက် ဘာမှ အားမငယ်နဲ. တားတားတို.က ငယ်ငယ်ကတည်းက မိုက် သဗျာ ဟဟဟဟဟ…
etone ရေ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ကောင်းကွက်ကလေးတွေ တူးဆွ အားပေး
ဗိုက်ကလေး တယောက် ထီပေါက်ပါစေကွာ..
ahnyartamar ရေ တစ်ခွက်ဆိုတော်ပါပီ..တစ်ဖလားလောက် ဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်ရောက်မှာဟုတ်ဘူး..ဟဲဟဲ
Khaing Khaing …
Shwe Tike Soe..
ကြိုးစားနေရင်လောကကြီးက အိုကေပါဘဲ။…ဟုတ်ပါတယ်..ကျွန်တော် ဒီအချက်ကိုတော့
စိတ်အပန်းဖြေဘို့ ပျော်စရာအဖြစ်ဂေဇက်ကိုရွေးထားတာလည်း ကောင်းပါလေ့ဗျာ..
ဦးမိုက် ကျွန်တော့ကို စောင်းမပြောပါနဲ့ ဗျာ
ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်သိပါတယ်
ငါနဲ့ တူလိုက်တာကွယ် ..
အရက် မသောက်တာက လွဲလို့ပေါ့ ..
ကျနော်လည်း ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပါပဲ ….
ဘာတတ်တုန်းမေးကြည့် အင်း .. ဟိုဟာပဲ တတ်သလိုလို၊ ဒီဟာပဲ တတ်သလိုလိုနဲ့ ..
တကယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ ဘာမှကို ဟုတ်တိပတ်တိ တတ်ဘူးရယ် …
အဖေကတော့ ပြောဖူးတယ် .. ထူးမှ ကြိုက်တာတဲ့ …
ဘာမှ မထူးရင် မိန်းမနှစ်ယောက်သာ ယူပစ်လိုက်ကွာတဲ့ ..
အဲဒီလိုတော့ ယူချင်ပါဘူး …။
အခု တစ်ယောက်တည်း နေတာတောင် ကြပ်နေတာ ..။ မိန်းမ နှစ်ယောက်သာ ယူလို့တော့ လွယ်ဘူးရယ် …
အော် .. မေ့လို့ ..
အားပေးသွားပါတယ် အူးကြီးမိုက်ရေ ….
အံဇာမရေ..လူဆိုတာ လွယ်တာကိုလိုက်နာတတ်ပီး ခက်တာကိုရှောင်ချင်ကြတဲ့
ဒီယောင်ယောင်မလုပ်ဘဲ ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါရာကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ရင်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပီး ဘ၀မှာ အထင်ကရမှတ်တိုင်လေးတွေ စိုက်စေချင်တာပါ..
ကြီးမိုက်ကတော့ အရွယ်လွန်နေပီမို့ အရွယ်မလွန်သေးသူတွေ လုပ်နိုင်အောင်စေတနာနဲ့ပါ..
ကဲဗျာ .. ဦးကြီးမိုက်ကို ကိုကြီး လို့ပဲ ခေါ်တော့မယ်ဗျာ ..
ကိုကြီးရေ … (အစမ်းခေါ်ကြည့်တာ … )
ကိုကြီးရဲ့ စေတနာတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ..
ဒါပေမယ့်လို့လည်း ညီမှာ အားနည်းချက် တစ်ခုရှိတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ ..
အဲဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု နည်းခြင်းပါပဲ ကိုကြီးရေ ..
အဲဒါကို ပြင်ပေမယ့် လူတွေကြားထဲ ရောက်သွားပြီဆို ယုံကြည်မှုတွေက
ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဆိုသလို ပျောက်ဆုံးသွားတတ်စမြဲပါပဲ …
ဒီတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရဆုံးပဲ ကိုကြီးရာ ..
နောက်ထပ်လည်း ရှိပါသေးတယ်ဗျ ..
“တီချယ်ကြီး” … လည်း ပါတယ်လေ ..
ဂယ်ဆို တီချယ်ကြီးကို မေကြီးလို့တောင် ခေါ်ပစ်လိုက်ချင်တာ …
အဲလို ခေါ်လို့ ရမလားဟင် …
ကျနော်က ဒီရွာထဲကလူတွေ အများစုထက် ငယ်လို့ ..
နောက်ထပ်ကလည်း ဆွေမျိုးသားချင်းလိုမျိုး ခင်မင်ချင်လို့ …
အဲဒီလို ခေါ်တာပါလို့ ….
ကိုယ်လုပ်ချင်တာထက် အခြေအနေပေးသလိုကြည့်ပီး စခမ်းသွားခဲ့ရတာလေ…
ဘာဘဲပြောပြော..ကျွန်တော် ဂေဇက် ရွာသားတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးရတာ
စကားလုံး တွေက စတင်းဂန်း နဲ့ မွေ့လိုက် သလို လွတ်ပေါက်မရှိ အားလုံးထိ။
“အင်း ဟုတ်သဟ” “အင်း ဟုတ်သဟ” နဲ့ ပြီးသွားတာတောင် ဆက်ဖတ်ချင်တုန်း။
လောလောဆယ်တော့ ရှင့်လိုဘဲ အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူများနားမလည်တဲ့ စာတွေရိုက်နေတာ။
မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည် သုံးသပ် ခြင်းရှိရင်ဘဲ အခြေအနေတော်တော်ကောင်းလှပြီ။
အနဲဆုံးတော့ ကိုယ်ဘယ်လောက်တော်တယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန် သိရပေသပေါ့။
မဟုတ်ရင် သူများအပြောနဲ့ သိပ်မယုံချင်ဘူး။ ;-)
ဟန်ဆောင်မှုတွေတဲ့ ၊ မှန်လိုက်တာ အူးမိုက်ရာ
နေ့ စဉ် မပျက်မကွက် ကိုယ့်မျက်နှာမှာတပ်နေရတဲ့ အဲဒီ့ မျက်နှာဖုံးကြီး ကို ခွါချပစ်ချင်လှပါဘီ။
အဲ့ဒီလို ရုံးခန်းမှာ ထိုင်ရဖို့ အဲ့ဒီလို ဇနီးမယားနဲ့ မိသားစု ရှိဖို့ဆိုတာလည်း တော်ရုံ အရည်အချင်းနဲ့မှ မရတာ ။ ဒီလောက်ကတော့ ဆိုးတယ် မခေါ်ပါဘူး ဦးမိုက်ရယ်။
ကိုယ်ဖြစ်နေတာ ကိုယ်သိ …(ပေါ်၊ သိ)
မဟုတ်သေးဘူး။ မဟန်သေးဘူး ဆိုတာကိုသိတယ်။ နောက်တစ်မျိုး
ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်၊ ပထမ ကိစ္စ ပျက်သွားပြီ….. (ပျက်)
ဒီတော့ ကိုကြီးမိုက်တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရုပ်နာမ် ရထားတဲ့ ကျမတို့ အားလုံး ယိမ်းကနေသလိုပါပဲရှင်။
ကိုကြီးမိုက်ရေ … Compliment ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။တကယ့်ကို
အမှန်အတိုင်း ဂုဏ်ပြုတာပါ။ This isavery good writing!
ကိုမိုက်ရေ …ကြိုက်သဗျာ ။
ငယ်ငယ်ကတဲ ကမိုက်နေတဲ.ကျွန်တော်လည်း ခုထိမိုက်နေတုန်းပါဗျာ ။
တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ် ဘယ်တော.များမှ လွတ်ငြိမ်းခါင်.ရပါ.မလဲ လို. ။
ခလုတ်တိုက်မိတာတွေတော. ခဏခဏ ဘဲဗျို. ….။
တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ် ဘယ်တော.များမှ လွတ်ငြိမ်းခွင်.ရပါ.မလဲ လို. ။
အလှူငွေလာပေးတုန်းက နာမည်မေးတော့ ….
ကြီးးးး ကြီးမိုက် ပါ လို့ ပြောသွားတယ် ဆိုလား…
ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ် ဒုက္ခရောက်ပုံလေး ကြားလိုက်မိသလားလို့။
ကြီးမိုက်ဆိုတာ ငယ်ငယ်က အတော့်ကို တော်ခဲ့တယ် လို့ ပြောတာများလား?????
(သို့) ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ် ဘာသာရပ် အလုပ်..ကို
ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု့ တဖြေးဖြေး တက်လာပါလိမ့်မယ်..
လေ့ကျင့်ယူလို့မရတာမရှိဘူးလို့လည်း ယုံကြည်ထားဖို့ လိုတာပေါ့..
ညီလေး လိုချင်တာက ..
အဟဲ .. သိဒယ် မီဟုတ်လား ..
ကိုယ်အကြောင်းကိုယ် အမှန်တကယ်ဝေဘန်ဆန်းစစ်ပီး ရေးတာပါ..
Pooch ရေ…ကိုယ့်အဖြစ်ကို ဆိုးတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး..
အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတာတွေ့ရတော့ …ငါသာ အစကပြန်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လို့..
တီချယ်ကြီးရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးကို
အားတက်မိပါတယ်..အများကို အကျိုးပြုမဲ့ ပို့စ်တွေ
ဒီပို့လေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့လို အရွယ်မလွန်သေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်
ကိုရင်ဆာမိရေ..ကျုပ်က ခင်ဗျားစာအရေးအသားက ကိုကျိတ်ပီး
အမှန်ဘဲ ဒေါ်မမရေ…၀င်လာတုန်းကတော့ လူကြီးလူကောင်းစတိုင်နဲ့
အလှူငွေပေးလိုက်တော့မှ နာမည်မေးလို့ နဲနဲတွေသွားပြီး..
“ကြီးမိုက်ပါ” လို့လဲပြောလိုက်ရော ကောင်မလေးက
တအံ့တသြမော့ကြည့်တယ်ဗျာ.. အဲဒီဆိုင်က ကျုပ်အရွယ်လောက်
လူရည်သန့်သန့် ကြီးကလည်း အံသြတဲ့ ဟန်နဲ့ ဖြတ်ကနလှဲ့ကြည့်
ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်..ဟီး ဟီး..(ကိုဆူး ကလည်းရှိမနေဘူးလေ)
ဆိုင်က ကောင်မလေးက အမရေ.. အလှူငွေ လာပေးသွားတယ်။
ဘယ်သူလဲ ဆိုတော့.. ဦးကြီးမိုက် တဲ့.. သူ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားတာတော့ မပြောပါဘူး။
ဆူး စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ အချိန်တုန်းက တွေးမိလိုက်တာကတော့.. ဦးကြီးMike ဆိုတဲ့ နာမည်မျိုး ပြောလိုက်တာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်လိုက်မိတယ်။
ဆူး က အဲဒီ အချိန်တုန်းက ခရီးထွက်မယ် ဆိုပြီး အတိအလင်းကြေညာထားခဲ့တာဆိုတော့ နောက်ကြောင်းအေးတယ်လေ။ ဆူး လည်း တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။
ကျနော်က အစ်ကိုလောက်တော့ မကြီးသေးဘူး
ဒါပေမဲ့ မိုက်တာကတော့ မိုက်တယ်….
ကို ကြီးမိုက် ရေ
မနက် ၅ နာရီ ထပြီး ဘုရား ရှိခိုး ဖြစ်တယ် ဆိုတည်းက မိုက်တာ မဟုတ်ဘူး လိမ္မာတာ ပေါ့။
ကျွန်မအသက်ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်မ ကြီးဒေါ်အပျိုကြီးကို ဒေါ်ကြီးမိုက်လို့ ကွယ်ရာမှာ ခေါ်ခဲ့တာ …. အသက်ကြီးလေ မလိမ်မာတော့လေလို့ ထင်မိလို့လေ …
ဒါပေမယ့် အခု ကျွန်မလဲ အသက်ကြီးလာရော ၀ဋ်လည်ပြီဆိုတာ သိလိုက်ပြီ …. ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန်ကစပြီး ပြုပြင်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့တာ ဒီနေ့အထိပါပဲ ..
ပြောရင်ပြောရင်း ဘိုသံပေါက်တွားလို့ချောဒီးစ်